मोबाईल टुटफुट भयो ? नो चिन्ता मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल - मोबाईल टुटफुट भयो ? नो चिन्ता मेरो सुरक्षाले दिन्छ नयाँ मोबाइल
नेपालबहस संवाददाता २०७५, १ श्रावण, 05:26:31 AM
काठमाडौं । मोबाइल हराउने वा विभिन्न कारणले बिग्रिने समस्याले चिन्तित हुनुहुन्छ ? अब ढक्क हनहोस, चिन्ता लिनु पर्देन, तपाईको मोबाइलको रक्षा अब मेरो सुरक्षाले गर्ने भएको छ ।
नेपालमै पहिलो पटक सञ्चालनमा आएकोमोबाइल प्रोटेक्शन प्लानले मोबाइलका प्रयोगकर्ताको हैरानीको अन्त्य गर्ने भएको हो । मेरो सुरक्षा प्रालिले स्मार्टफोनको सुरक्षाको लागि “मेरो सुरक्षा स्मार्टफोनको गर्छ रक्षा”नामक योजना सुरु गरेको छ ।
मेरो सुरक्षाका अनुसार जुनसुकै स्मार्टफोन ड्यामेज भएमा, हराएमा वा चोरी भएमा मोबाइलका प्रयोगकर्ताले प्रोटेक्शन प्लान अन्तरगत नयाँ मोबाइल पाउने छन् । साथै कम्पनीले हराएको सम्पूर्ण डाटा रीकभर गरी प्रयोगकर्तालाई नयाँ मोबाइलसेट उपलब्ध गराई टेन्सन मक्क्त जीवनमा सहयोग गर्नेछ।
‘अहिलेको आधुनिक युगमा स्मार्टफोन अनिवार्य बनिसकेको छ ।
व्यस्त दैनिकीमा स्मार्टफोन जुनसुकै कारणले पनि ड्यामेज हुनसक्छ, हराउन सक्छ । जसले गर्दा प्रयोगकर्तालाई डाटाका साथै ठूलो नोक्सान हुनसक्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर मेरो सुरक्षाले मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान सुरु गरेको हो । मेरो सुरक्षाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम सुनवारले भने ।
२०७५, १ श्रावण, 05:26:31 AM